Penelope လည်ပင်း Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာထိုး - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / Penelope လည်ပင်း Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာထိုး
SKU: 2886 categories: အဝတ်အစား, အမြိုးသမီးမြား
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး PENELOPE DRESS TUTORIAL here.
Copyshop အရွယ်အစား: 115cm x 99cm
A4 စာမကျြနှာ: 24
Match the SKIRT waistline to the WAIST piece. တွယ်အပ်, stitch and finish as before.
ထပ်ခါတလဲလဲခြေလှမ်းများ 1-3 for the LINING.
ချုပ်, clip and trim the seam allowances to allow it to lay flat once turned RIGHT SIDES out.
ဒီ website သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. ကျနော်တို့သင်ဤအတူအိုကေပါပဲယူဆပါလိမ့်မယ်, သို့သော်သင်ရွေးချယ်ထွက်နိုင်ပါတယ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်.Accept Reject ဆက်ဖတ်ရန်